Eco တာအမျိုးသမီးစာမျက်နှာ4ru en pl uk de fr tr ar eo zh-tw az af be bg bs bn zh-cn ca cs ceb sq hy da eu hr et nl fi tl ka gl el ht ha iw lv ga it is la jw lt id ig hu mt ms ko mi no mg hmn pt ja ro st sr kk ne pa si my so es su sv fa km uz cy yo zu vi lo ur tg mk mn yi gu hi kn ml mr ta te th ﻿
Navigator အဓိကအ Dream ဖက်ရှင် ကျန်းမာရေး Recipes အကြံပြုချက်များ လက္ခဏာများ << 1234567 >> အလေးချိန်ဆုံးရှုံးမှုများအတွက် squash အစားအသောက်များတွင် မကိုယ်အလေးချိန်ရန်လိုအပ်ကြောင်းကမ်းခြေရာသီအတွက်မျှော်, နွေဦးမှာအထူးသဖြင့်လူတန်းစားဖြစ်လာနေသည်။ ဒါပေမယ့်ကျွန်တော်တို့အများစုကပါးလျဖြစ်လာမှ, ဒါပေမယ့်လည်းကျန်းမာရေးကိုထိန်းသိမ်းထားဖို့နဲ့သင့်ခန္ဓာကိုယ်ညှဉ်းဆဲခြင်းငှါမသာချင်တယ်။ ဒါဟာ5ရက်များအတွက်5ကီလိုဂရမ်ဖယ်ရှားပစ်ရလိမ့်မည်သာ, ဒါပေမဲ့အားလုံးလိုအပ်သောဗီတာမင်နှင့်အတူကိုယ်ခန္ဓာကိုပြည့်ကြလိမ့်မည်ဟူသော, သင်ဒဏ်ငွေ courgettes ကူညီပေးပါမည်ကိုဤအစားအသောက်များတွင်အတွက်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအစားအသောက်များတွင်နောက်ထပ်အလှတရား zucchini အစားအသောက်များတွင်အဘို့များစွာသောချက်ပြုတ်နည်းများ, သင်ထောက်ပံ့ဒါအစားအသောက်မတူကွဲပြားမှုရှိပါတယ်ကြောင့်ဖြစ်ပါသည်။ ဟုတ်ကဲ့နှင့် zucchini အစားအစာ၏ပြင်ဆင်ထားဟင်းလျာများအလွယ်တကူလျှင်မြန်စွာ။ zucchini ၏ ကို Cream ကို ကိုပါဝင်ပစ္စည်းများ: courgettes -2PCs .
Intrauterine ရောဂါကူးစက် စမ်းသပ်မှုအပေါ်နှစ်ဦးသက်ဝင် strips တွေ, အနာဂတ်တွင်မိခင်များ၏အတွေးမှာလက်နက်ဝမ်းမြောက်သောစိတ်, အမီးမဖွားမှီဆေးခန်းများနှင့်စမ်းသပ်မှုများအဘို့အလို့ညွှန်ကြားချက်ကိုတစ်ခုအစုံမှလာမည့်ခရီးစဉ် .
ကျွန်မကိုယ်ဝန်ကို run နိုင်ပါသလား? ကိုယ်ခံစွမ်းအားစနစ်နှင့်အမျိုးသမီးများအား၏အထွေထွေသုခချမ်းသာကိုခိုင်ခံ့စေရန်နှင့်ထိုကဲ့သို့သောအမျိုးသမီးတစ်ဦးသည်အများအားဖြင့်တစ်ဦးအထိုင်များတဲ့လူနေမှုပုံစံသောအခါအဖြစ်တင်ပဆုံကိုယ်တွင်းအင်္ဂါထဲမှာကြောပိတ်ဆို့မှုကိုလျှော့ချရန်နှစ်ဖက်စလုံး အမြိုးသမီးမြားကိုမကြာခဏသန့်ရှင်းလတ်ဆတ်သောလေထုထဲတွင်စစ်ရေးလေ့ကျင့်ခန်းအဖြစ်ရွရွပြေးတာကိုသုံးပါ ကို p>
ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေစဉ်အလုပ်လုပ်ခြင်း: တတ်နိုင်သမျှသို့မဟုတ်မတတ်နိုင်သမျှ ?
စတိုင်အမျိုးသမီးရဲ့အဝတျအစား မည်သူမျှရှိသမျှမိန်းမ, စတိုင်ဖက်ရှင်နှင့်ခေတ်မီကြည့်ဖို့လိုလားဆိုတဲ့အချက်ကိုနှင့်အတူငြင်းခုန်ဖို့ဝံ့။ သို့ရာတွင်ထိုသို့သည်ဤလူတိုငျးအတှကျမကထွက်အဖြစ်ပြောင်းသွားသည်။ ဒါကြောင့်သာယာလှပတဲ့ကြည့်ရှု, ဒါပေမယ့်လည်းချို့ယွင်းချက်ပုန်းရှောင်နှင့်ကိန်းဂဏန်း၏ဂုဏ်သိက္ခာကိုအလေးပေးပြောကြားနိုင်ပါမသာနိုင်အောင်ကံမကောင်းစွာကတစ်ဦးစတိုင်အမျိုးသမီးရဲ့အဝတျအစားကိုတက်ခူးဖို့ခက်ခဲသည်။ ဒါပေမဲ့စည်းကမ်းချက်ဖို့ချွင်းချက်ရှိပါသည်။ အကယ်စင်စစ်သင်တို့ရှိသမျှအချိန်တိုင်းနေသောမိန်းမတို့, စုံလင်သောကြည့်ရှုပထမတစ်ချက်မှာလက်ျာအဝတ်အစားနှင့်ပွဲစဉ်ကိုရွေးချယ်နိုင်စွမ်းရှိသည်, လုံးဝ incongruous element တွေကိုစီမံခန့်ခွဲတွေ့ဆုံခဲ့ပြီးပါပြီ။ အများစုကသူတို့ဘယ်လိုအောင်မြင်နိုင်ပါတယ်စဉ်းစားမိ?
အဆိုပါမြေထဲအစားအသောက်များတွင် - တစ်ပတ်များအတွက် menu ကို မမြေထဲပင်လယ် - ချက်ပြုတ်စား၏၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်အစဉ်အလာရှိပါတယ်တစ်ခုချင်းစီ၏သလောက် 16 ဦးအဖြစ်နိုင်ငံပေါင်းဖြစ်ပါတယ်။ သို့သော်သူတို့ကိုရိုးရာအစားအစာမှီဝဲကြောင်းဘုံထဲမှာအများဆုံးအသုံးဝင်သည် - မြေထဲပင်လယ်အစားအစာ၏ထုတ်ကုန်များဖြစ်ကြသည် ။
မြေထဲအစားအသောက်များတွင် ၏အကျိုးကျေးဇူးများ ယခုကိုယ်အလေးချိန်အသုံးပြုသည်ဟူသောသက်တမ်းသည်မြေထဲပင်လယ်အစားအသောက်များတွင်, ပထမဦးဆုံးအမေရိကန်သုတေသီများသည်, နောက်ဆုံးရာစု 50s အတွက်အစာအာဟာရပညာရှင်တွေအသံထွက်ခဲ့သည်။ ဒါဟာအဆီကြီးများစားသုံးမှုနီးပါးမျှမဆီးချို, အဝလွန်နှင့်နှလုံးသွေးကြောဆိုင်ရာရောဂါကြားမှ, ပြင်သစ်၏တောင်ဘက်၏နေထိုင်သူများကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ နောက်ပိုင်းတွင်ပင်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းစာရင်းဇယားချီးမြှင့်ခဲ့ပါတယ်: နှလုံးသွေးကြောဆိုင်ရာရောဂါဟာဖွံ့ဖြိုးဆဲ၏ 33% လျော့ကျ;
သင်တို့အဘို့အစပျစ်သီးကိုအရသာရှိတဲ့သခါပှဲရိတ်ရန်, စက်ရုံစနစ်တကျကျွေးမွေးဖို့အချိန်အတွက်ဖြစ်ရပါမည်။ အမြစ်နှင့်ရွက်: စပျစ်သီးအမျိုးအစားနှစ်မျိုးအစာကျွေး။ အမြစ်သည်နို့တိုက်ကျွေးရေးစပျစ်သီးကိုအခြေခံအကျဆုံး, အခြေခံဖြစ်စဉ်းစားသည်ဆိုပါကရွက်မလိုအပ်ပါဘူးလို့ဆိုလိုတာမဟုတ်ပါဘူး။ နို့တိုက်ကျွေးရေး၏ဒီ type ကိုချက်ချင်းကိုချက်ချင်းသိသာ fertilizing ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုကတည်းကချုံဖုတ်၏လိုအပ်ချက်များနှင့်အခွအေနေကိုတုံ့ပြန်ရန်ခွင့်ပြုထားကြောင်းအဆိုပါအချက်ကို။ ရွက်နို့တိုက်ကျွေးရေး ချုံဖုတ်အရွက်ရှိသည်သည်အထိ ဒါဟာ, အရွက်နို့တိုက်ကျွေးရေးစပျစ်သီးကိုမကြာခဏနွေရာသီအတွက်အထဲကသယ်ဆောင်အသုံးပြုနိုင်သည်ဟုပါထောက်ပြရကျိုးနပ်သည်။ ဒီလုပ်ထုံးလုပ်နည်းကိုချက်ချင်းအပြောင်းအလဲနဲ့ပြီးနောက်ဖြင့် Macro-စုပ်စာရွက်ဖြစ်သောကြောင့်, အိုမင်းခြင်းစပျစ်နွယ်ပင်များကိုတိုးတက်လာဖို့ကူညီပေးသည်။ သို့သော်ပမာဏကိုမှုမရှိခြင်းကိုဖြစ်ပါတယ်, ဒါကြောင့်တပြင်လုံးကိုရွက် fertilization ထိရောက်မှုအာဟာရရွက်မှတဆင့်လက်ခံရရှိခဲ့သည်။ မတစ်သင်းလုံးကကစားသမားဤအမျိုးအစားများ၏ငြင်းအားသာချက်အမြစ်မှာစက်ရုံတစ်ရုံများအတွက်လိုအပ်သောသွပ်, သံ, မန်းဂနိစ်, ချက်ချင်းနီးပါးသည်, အမြစ်မလုံလောက်သောပမာဏအတွက်လက်ခံရရှိသို့မဟုတ်လက်ခံရရှိကြသည်မဟုတ်, ရွှေ့ဖို့စွမ်းရည်ကိုဆုံးရှုံးသွားခြင်း, မြေဆီလွှာထဲတွင်ခညျြနှောငျအောင်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ကောင်းပြီဈေးကွက်ထဲမှာသက်သေပြချက်သံဖြင့် chelate တစ် chelate ၏ပုံစံအတွက်မန်းဂနိစ်နှင့်အခြားမူးယစ်ဆေးဝါးများ၏ chelate အဖြစ်အစာကျွေးနေကြသည်။ အမြစ်မြေသြဇာ အထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်း တစ်ဦးကို root method ကိုထက်သောစပျစ်သီးကိုလုပ်ကျွေးဖို့အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းရှိနေပြီ။ ဓာတ်မြေသြဇာဒါခေါ်အမြစ်ဇုံ (30-40 စင်တီမီတာ) ၏အတိမ်အနက်ကိုမှာလျှောက်ထားရမည်ဖြစ်သည်။ စပျစ်သီးကိုပြာ, mullein, ကြက်သားခြေးသို့မဟုတ်အထူးဖြေရှင်းနည်းများနို့တိုက်ကျွေးပြီးနောက်အပင်ဖောဖောသီသီရေလောင်းခံရသင့်ကြောင်းမေ့လျော့တော်မမူပါ!
<< &nbsp;  &nbsp; 1 &nbsp;2&nbsp;3&nbsp;4&nbsp;5&nbsp;6&nbsp;7&nbsp;   &nbsp; >> &nbsp;       အဆိုပါ site ကိုပစ္စည်းများကိုပုဂ္ဂလိကစုဆောင်းခြင်းသည်နှင့်